I-china ukonga amanzi kunye neplume yokunciphisa isistim sokupholisa abenzi kunye nabathengisi | SHUANGLIANG ECO-AMANDLA
Ugcino lwamanzi kunye neplume yokuncitshiswa kwenqaba yokupholisa
Iindlela zokupholisa zesintu zokujikeleza kwamanzi kwimizi-mveliso
Ubushushu obukhulu buveliswa kwinkqubo yemveliso yentsimi yeemveliso, efuna ukupholisa ngokujikeleza inkqubo yokupholisa amanzi. Inkqubo yokupholisa yendabuko yinqaba evulekileyo yokupholisa amanzi.
Iingxaki ngeendlela zokupholisa ngokwesiko
● Ukusetyenziswa kwamanzi aphezulu (1.5% ~ 1.8% amanzi ajikelezayo), inkunkuma enkulu yobutyebi bamanzi, ukungathotyelwa komgaqo-nkqubo wezokusingqongileyo;
● Ukusetyenziswa kwamanzi okuphezulu kunye neendleko zokucocwa kwelindle, uqoqosho olubi;
● Ukusebenza ebusika kuvelisa inani elikhulu lenkungu emhlophe, liba ngumphathi wenkungu, kunye "netyala" leHaze;
● Inkungu emhlophe yasebusika yenza ikhephu, iqabaka elinemozulu eshushu ebangele umngcipheko wokhuseleko.
Ngokuqiniswa kwemigaqo-nkqubo yokhuselo lokusingqongileyo, iindlela zesiko zokupholisa amanzi ziya kutshintshwa. Ukonga umbane kukaShuangliang, ukonga amanzi kunye nokususa inkungu kwinkqubo yokuhambisa amanzi ejikelezayo kwimizi-mveliso ijonge ukufezekisa izibonelelo ezimbini zokhuselo lokusingqongileyo kunye noqoqosho.
1. Inkungu yokutshiza yokupholisa eyomileyo yokujikeleza kwamanzi
Inkqubo yokupholisa eyomileyo yenziwa yityhubhu yentsimbi engenanto, i-louver, inkqubo yokuhambisa amanzi, ukwanda kwetanki lamanzi, inkqubo yokupholisa ukutshiza, iqela labalandeli njalo njalo. Irediyetha yokupholisa umoya icwangciswe ngokuthe nkqo ngaphandle kwenqaba, exhomekeke emoyeni ukupholisa ukujikeleza kwamanzi, kodwa xa ubushushu bemo ephezulu buphezulu, ukutshiza amanzi kumphezulu weradiyetha kusetyenziswa ukunceda ukupholisa.
01 / Ukusetyenziswa kwamanzi asezantsi
Kunyaka wonke, kuphela ehlotyeni iqondo lobushushu eliphezulu kunye nexesha elifutshane lokupholisa isityalo eliza kusebenza, ireyithi yokonga amanzi yonyaka ingaphezulu kwama-95%.
02 / Ukulungiswa kokugcina
Irediyetha icwangciswe ngokuthe nkqo ngaphandle kwenqaba, ebunjwe kuphela yiradiyetha yokupholisa umoya, inkqubo ye fan kunye nenkqubo yombhobho wamanzi evaliweyo. Izixhobo zokugcina zingaphantsi, kwaye akukho sidingo solawulo lomgangatho wamanzi okutshiza. Ukusebenza kunye nokugcinwa kulula kwaye kufanelekile ngaphandle kokusebenza kunye neendleko zokugcina.
I-03 / Iindleko zokusebenza eziphantsi zokujikeleza amanzi
Inkqubo yokujikeleza kwamanzi yinkqubo evaliweyo yokunyusa okuphantsi kunye nokusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
I-04 / Inkqubo eQhelekileyo yoBume boMnqamlezo woBume boMjikelo
Uyilo lokuqukuqela okuphindwe kabini kobume bokunqamla umnqamlezo lwenza ubungakanani bokuhambisa ubushushu beradiator yokupholisa umoya iphezulu kunaleyo yokuhamba komgaqo wokuhamba, kunye nendawo yokudlulisa ubushushu iyonke inokuncitshiswa malunga ne-20%.
I-05 / ilungiselelo lokubuyela umva, umncinci omncinci
Icala lokungena lomoya elisecaleni kunye nelungiselelo lokubuyela umva liyamkelwa ukunciphisa indawo, kwaye ifuthe lomoya oshushu we-reflux lincinci.
06 / Ukusebenza
Ilungele ubushushu obuphezulu bamanzi amdaka (ngaphezulu kwama-38 ℃) amanzi ajikelezayo.
2. Uhlobo lwe-V lokwahlula-hlula amanzi kunye nenkqubo yokunciphisa iplume
Inkqubo eyahlukileyo yokonga amanzi kunye nokususa inkungu ineebhotile ezigqityiweyo, ukujikeleza kombhobho wamanzi kunye neqela labalandeli. Ukupholisa umoya kwi-V kunye nomoya wokungenisa umoya wokupholisa amanzi kwinqaba kulungiswe ngokuzimeleyo kwaye kuqhagamshelwe ngokujikeleza umbhobho wamanzi. Amanzi ajikelezayo ebusika apholiswa kuphela ngohlobo lwe-V olupholileyo lomoya, akukho mphunga wamanzi umphunga; ukujikeleza kwamanzi entwasahlobo nasekwindla kuyapholiswa kuqala ngu-V wohlobo olupholileyo lomoya, emva koko lupholiswe ngumoya wokupholisa amanzi wenqaba, kwaye isixa somphunga wamanzi sinyuke sincinci; inqaba yokupholisa amanzi enomoya wokungenisa umoya isetyenziswa ngexesha lasehlotyeni elinobushushu obuphezulu.
01 / seemodyuli, kulula ukuyifaka
I-V yomoya opholileyo yamkela ubume bokuzixhasa, uyilo lweemodyuli, ukufakwa ngokulula nangokukhawuleza.
Tube bundle ilungiselelo ethe tyaba, ibhokisi yesiciko sebhokisi yokugubungela esisuswayo, kulula ukuyifaka ityhubhu yokucoca ngaphakathi kunye nokugcina.
I-03 / Ireyithi ephezulu yokonga amanzi yonyaka
Amanzi ajikelezayo apholile kuphela ngohlobo olungu-V lomoya opholileyo ebusika, ngaphandle komphunga womphunga wamanzi; ukujikeleza kwamanzi entwasahlobo nasekwindla kuyapholiswa ngohlobo olupholileyo lomoya ongu-V, umthwalo wokupholisa wenqaba yokupholisa amanzi kwinqaba ethile uyinxalenye, ukusetyenziswa kwamanzi kuphantsi, kwaye inqanaba lokugcina amanzi lonyaka lifikelela kuma-60%.
04 / Ipropathi yokuthintela ubushushu
Sebenzisa uyilo olukhethekileyo lokuqanda, ukusebenza kobusika akufuneki ukuba kusete iimfama, anti -umkhenkce ukhuselekile kwaye unokwethenjelwa.
05 / Uyilo olwahlukileyo
I-V yohlobo olupholileyo lomoya lucwangciswe ngokuzimeleyo ukusuka kumatshini wokupholisa amanzi opholileyo. Ngokweempawu zesiza, yonke indawo ekhoyo kunye nolungelelwaniso olunokwenzeka zinokwenziwa. Ukuba le ndawo ixinene, i-V yohlobo olupholileyo lomoya lunokucwangciswa ngaphezulu endleleni.
Ukulungele ukuguqula amanzi ukuguqula inqaba yokupholisa amanzi.
3. Ukonga amanzi-owomileyo okomileyo kunye nepome -abatement tower tower
Isixhobo esichasene nefogging esomileyo-esidibeneyo sokudibanisa inkungu yokupholisa inqaba ikakhulu iqulunqwe yinto yokuhambisa ubushushu kwicandelo elomileyo-elipholileyo, isixhobo sokuhambisa ubushushu kwicandelo elimanzi elimanzi, isivalo sombane kwicandelo elomileyo-elipholileyo, i-shutter yombane emanzi- Icandelo elipholileyo kunye nemibhobho.
Amanzi ajikelezayo angena kwindawo yokupholisa eyomileyo yokutshintsha ubushushu ukuze upholise emva koko ungene kwindawo yokupholisa emanzi yokupholisa ukufafaza.
Vula isangqa esomileyo-amanzi-okonga amanzi kunye ne-plume -abatement tower tower
Indawo evulekileyo emanzi eyomileyo edibeneyo yokonga amanzi kunye neplume yokupholisa inqaba ineziqwengana zomoya-opholileyo, ityhubhu evaliweyo eyomileyo, iifilitha zamacandelo apholileyo, imibhobho, izivingco zecandelo elinamanzi, imibhobho, amaqela abalandeli, njl. Amanzi ajikelezayo angena kwindawo yokupholisa eyomileyo yokuhambisa ubushushu kwityhubhu kwaye emva koko ungene kwindawo yokupholisa emanzi yokupholisa ukutshiza.
01 / ubume Flexible
Icandelo lokupholisa elimanzi licwangciswe ngokwendlela yesiqhelo yokupholisa inqaba, kwaye ityhubhu yokuhambisa ubushushu yecandelo lokupholisa elomileyo icwangciswe kumacala omabini omzimba wenqaba (ngaphandle komzimba wenqaba), elula kwaye eguqukayo.
02 / Amandla anamandla okonga amanzi kunye nokuphelisa inkungu
Ityhubhu yokuhambisa ubushushu yecandelo lokupholisa elomileyo lamkela iityhubhu zokugqibela eziphezulu, ezilungiselelwe kuwo omabini amacandelo omzimba wenqaba kwaye zinokwandiswa ngobude kunye nohlengahlengiso lohlobo.
03 / Amandla ephantsi fan
Umbhobho ogqityiweyo uhambelana kwicala lomoya wecandelo lokupholisa elimanzi, ukunganyangeki komoya kuncinci, ukunganyangeki komoya akunyuswanga xa kuthelekiswa nenqaba yokupholisa amanzi yesiqhelo, kwaye amandla fan awanyuswa. Xa kuthelekiswa nemodyuli yohlobo lokujija inqaba, amandla ombane angama-30% asezantsi.
04 / Ukulungeleka kwesondlo
Iphakheji yetyhubhu yokupholisa eyomileyo icwangciswe ngokuthe nkqo kumacala omabini enqaba, kunye neqonga lokugcina ibundle eyomileyo yokupholisa ityhubhu imiselwe kwinqaba ukulungiselela ukugcinwa kwemihla ngemihla.
Ubumdaka kumphezulu wangaphandle wombhobho ogqityiweyo unokucocwa ngamanzi oxinzelelo oluphezulu. Ngokweemvavanyo zethu zokucoca kunye namava obunjineli, ukucoca phantsi koxinzelelo lwe-5 ~ 6 MPa kunokubuyisela ucoceko kwiradiyetha kwimeko yefektri kwaye ayizukubangela monakalo kwiradiyetha.
05 / Amanyathelo athembekileyo asebusika okulwa nokuqanda
Isiqwenga setyhubhu esigqityiweyo sisebenzisa amanqanaba amathathu okhuselo lokunqanda ukubanda. Isicwangciso-qhinga solawulo lokunqanda ukubanda kokunciphisa isantya sabalandeli, ukuvalwa kwezivalo kunye nokukhuseleka kokuxinana kunokuqinisekisa ukuba ityhubhu egqityiweyo ayikhenkceziswanga. Emva kokuba izivalo ezikwindawo emanzi nengqele zivaliwe ebusika, umoya obandayo wendalo awuyi kungena kwinqaba, oko kuthintela ukupakisha kokuqina.
Isiphaluka esivaliweyo esomileyo-esimanzi esindisa amanzi kwinqaba
Inqaba yokupholisa amanzi emanzi evaliweyo eyomileyo emanzi iqulethe ityhubhu egqityiweyo yecandelo lokubanda elomileyo, izivalo zecandelo elibandayo elomileyo, ikhoyili yokupholisa evaporative, inkqubo yokutshiza, i-shutter yecandelo lomphunga, imibhobho, iqela labalandeli njalo njalo. Amanzi ajikelezayo ayaphola kwisitampu sokuhambisa ubushushu secandelo lokupholisa elomileyo emva koko lipholile kwikhoyili yokupholisa evaporative. Umphezulu wangaphandle wekhoyili yokupholisa evaporative ufafazwa ngenkqubo yokuzitshiza ezimeleyo ukupholisa ukujikeleza kwamanzi.
Ityhubhu yokuhambisa ubushushu kwicandelo lokupholisa elomileyo licwangciswe kumacala omabini kwicala eliphezulu lomzimba wenqaba (ngaphandle komzimba wenqaba), enokwandiswa ngokulungelelanisa ubude kunye nohlobo lobeko, kwaye ilungele iimfuno zoyilo Iindawo ezahlukeneyo zokupholisa ezomileyo.
02 / Umgangatho ophezulu wokonga amanzi
Xa iqondo lobushushu kokuma lingaphezulu koyilo lobushushu lendawo yokupholisa eyomileyo kwaye iqondo lobushushu lokuphuma liphezulu kuneqondo lobushushu elinomda, i-coil yokupholisa evaporative iyatshizwa. Xa ubushushu bemo engaphantsi kuyilo lobushushu kwindawo epholileyo, akukho mfuneko yokutshiza amanzi. Amacandelo awomileyo nawamanzi apholisa umoya owomileyo, akukho manzi asetyenziswayo, kwaye izinga lonyaka lokugcina amanzi lingaphezulu kwama-75%.
Umbhobho ogqityiweyo uhambelana kwicala lomoya wecandelo lokupholisa elimanzi, ukunganyangeki komoya kuncinci, ukunganyangeki komoya akunyuswanga xa kuthelekiswa nenqaba yokupholisa amanzi yesiqhelo, kwaye amandla fan awanyuswa. Xa kuthelekiswa nokujija imodyuli yefogging tower, amandla ombane angama-30% asezantsi.
Iphakheji yetyhubhu egqityiweyo yamkela amanyathelo amathathu okhuselo lokulwa nokuqandusela, olunokuqinisekisa ukuba ityhubhu yokugqibela ayibandi ngumkhenkce ngesicwangciso sokulawula sokukhawulezisa sokunciphisa isantya sefeni, ukuvala i-shutter kunye nokukhusela amanzi. Ikhoyili yokupholisa evaporative yasebusika ayifuni ukupholisa ukutshiza ukunqanda umkhenkce ngaphandle kwekhoyili ebusika.
1. I-Chifeng Yun iCopper Nonferrous Metals Co., Ltd.
Umoya wokungenisa umoya owomileyo kwinqaba yokupholisa umoya
Umsebenzi ozinzileyo nothembekileyo ukusukela ngo-Okthobha u-2018
Ireyithi yokonga amanzi yonyaka ingaphezulu kwama-95%, kwaye ifuthe lokonga amanzi liyamangalisa
2. Iprojekthi yeXinjiang Xinlianxin Coal Chemical
Uhlobo lwe-V Lokwahlula aManzi ukuGcina kunye neNkqubo yokuNcitshiswa kwepume
Zizonke zintathu iiprojekthi zokwakha ngokutsha, inani lilonke lamanzi 60500 m3 / h
Sebenzisa uhlobo olwahlukileyo lokonga amanzi kunye nokususa inkungu, uyilo lweemodyuli, ulungelelwaniso oluguquguqukayo, ufakelo olulula, ulondolozo olufanelekileyo
Ngelixa kupheliswa inkungu emhlophe kwinqaba yokupholisa ebusika, i-4.73 yezigidi zeetoni zamanzi aphuma komphunga kunye ne-1.58 yezigidi zeetoni zelindle zacuthwa unyaka wonke. Inenzuzo enkulu kwezentlalo nezoqoqosho
3. Amandla eXinjiang Xiexin amandla iprojekthi ye-polysilicon eyi-100000
Ukonga amanzi okomileyo okomileyo kunye nenqaba yokupholisa iplume
Ukusebenzisana namashishini amakhulu asekhaya e-photovoltaic, iyonke yinqaba yokupholisa eyomileyo emanzi e-5, ukusukela ngo-Okthobha u-2018, umsebenzi ozinzileyo nothembekileyo
Icandelo lokupholisa elomileyo lamkela umkhono wecandelo lesinyithi setyhubhu yentsimbi yealuminium, umlinganiso wokuhambisa ubushushu uphezulu, ukonga amanzi kunye namandla okubambisa anamandla
Kwangelo xesha, inokuqonda inkungu engangunyaka wonke, kwaye ugcine amanzi malunga neetoni ezingama-300000 ngonyaka xa kuthelekiswa nenqaba yokupholisa amanzi yemveli
Egqithileyo Inkqubo yokupholisa eyomileyo ngokungathanga ngqo
Okulandelayo: Iteknoloji yeLithium Bromide Absorption
Inkqubo ekrelekrele yokuLawula ukupholisa
Inkqubo yendalo yomoya opholileyo
Ulwakhiwo lwensimbi yeNkqubo yokuPholisa eyomileyo
Inkqubo yokuGcina amanzi eyomileyo yokuPholisa
ulawulo wentsimbi struture okupholisa owomileyo ...